बार्षिक कार्यक्रम २०७६/७७ :
सि. न. विवरण समय भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने
१ आ.व. ०७५÷०७६ को आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने । श्रावण मसान्त भित्र
२ संघको व्यवसायिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने । श्रावण मसान्त भित्र
३ आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने । भदौं मसान्त भित्र
४ सहकारी ऐन २०७४ को शंसोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्ने । भदौं मसान्त भित्र
५ प्रारम्भिक सहकारी संघ/संस्थाहरु, विषयगत जिल्ला संघहरु र प्रदेश संघहरुको लागि केन्द्रीय संघ मार्फत व्यवस्थापकिय क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नको लागि सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल मा प्रस्ताव पेश गरि अनुदान माग गर्ने । असोज मसान्त भित्र
६ सहकारी संघसंस्थालाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ शंसोधनको लागि पहल गर्ने । असोज मसान्त भित्र
७ आ.व. ०७५/०७६ को लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने । असोज मसान्त भित्र
८ प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुको लागि संघद्धारा तयार गरिएको NEMCCU Co-Operative Accounting Software (NEMCCU) को marketing गर्ने । साथै उक्त कार्यमा जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारीलाई सशक्त बनाउने । कार्तिक महिना देखि
९ संघको मुख्य कार्यालय तथा सदस्य सुविधा काउण्टर, न्यूरोडको लागि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने । साथै रिक्त रहेको पदहरुमा कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने । कार्तिक मसान्त भित्र
१० संघको विनियमावलीहरु शंसोधन गर्ने । कार्तिक मसान्त भित्र
११ संघको वार्षिक शुल्क सम्बन्धमा सदस्य संघ संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने साथै वार्षिक शुल्क संकलन गर्ने । कार्तिक महिना देखि
१२ संघको सातौं वार्षिक साधारण सभा ०७५/०७६ सम्पन्न गर्ने । मंसिर मसान्त भित्र
१३ बहुउद्धेश्यीय सहकारी संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापकिय स्तरको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी/भेला संचालन गर्ने । पौष मसान्त भित्र
१४ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ शंसोधनको लागि पहल गर्ने । पौष मसान्त भित्र
१५ सल्लाहकार समिति, महिला उप–समिति तथा युवा उप–समिति गठन गर्ने । पौष मसान्त भित्र
१६ अन्तराष्ट्रिय संघहरुको सदस्यता लिने । पौष मसान्त भित्र
१७ मुलुकभर संचालित बहुृउद्देश्यीय सहकारी संघ/संस्थाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नको लागी Data Management Software निर्माण गर्ने । पौष मसान्त भित्र
१८ सहकारी विभागद्धारा निर्धारण गरिएको सन्र्दभ व्याजदर शंसोधनको लागि पहल गर्ने । पौष मसान्त भित्र
१९ कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना तथा संचालनको लागि आवश्यक पहल तथा सहयोग गर्ने । पौष मसान्त भित्र
२० संघको सदस्यता बृद्धि गर्ने । वर्ष भरी
२१ वचत तथा ऋणको कारोवारलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । साथै सदस्यता लिए पश्चात नियमित वचत गर्न पहल गर्ने । वर्ष भरी
२२ प्रारम्भीक सहकारी संघ÷संस्थाहरुको लागि संचालित तालिम कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने । वर्ष भरी
२३ संघ संस्थाको संस्थागत बिकास तथा पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापकिय क्षमता अभिबृद्धिको लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था गर्ने । वर्ष भरी
२४ High Level Management Skill Development तालिम ७ वटा प्रदेशमा संचालन गर्ने । वर्ष भरी
२५ अन्तर सहकारी कारोबारलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नको लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु बीच छलफल तथा गोष्ठी संचालन गर्ने । वर्ष भरी
२६ प्रादेशिक (७ प्रदेश) गोष्ठी संचालन गर्ने । वर्ष भरी
२७ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुलाई सुपरिवेक्षण÷निरिक्षण गर्ने । वर्ष भरी
२८ संघद्धारा तयार गरिएको व्यवसायिक योजना तथा ४ वर्षे रणनैतिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने । वर्ष भरी
२९ संघबाट प्रदान गरिने परामर्श, कागजात सेवा तथा सदस्यता विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै संख्यात्मक रुपमा बृद्धि गर्ने । वर्ष भरी
३० प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुको सबल व्यवस्थापनको लागि विनियमावलीहरु तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने । वर्ष भरी
३१ सम्बन्धीत निकायहरुद्धारा जारी गरिएको निर्देशनहरुको कार्यन्वयनको लागी आवश्यक कार्यविधिहरु निर्माण गर्न सहयोग गर्ने । वर्ष भरी
३२ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न तथा त्यसको कार्यान्वयनको लागी आवश्यक सहयोग गर्ने । वर्ष भरी
३३ अन्तराष्ट्रिय तालिम आयोजक संस्थाहरुसंग समन्वय गरी तालिम संचालन गर्ने तथा संचालित तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गर्ने । वर्ष भरी
३४ संदस्य संघ संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रद्धारा संचालित तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउनको लागि पहल गर्ने । साथै तालिम संचालनको लागि सहकार्य गर्ने । वर्ष भरी
३५ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम ÷ गोष्ठी÷ भ्रमणहरुमा सहभागी हुने । वर्ष भरी
३६ देशभर संचालित बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरुको प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय संघ गठन गर्न विशेष पहल गर्ने । वर्ष भरी
३७ ७ वटा प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गर्ने । वर्ष भरी
३८ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा merge गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने। वर्ष भरी
३९ COPOMIS कार्यान्वयनको लागी सहजीकरण गर्ने । वर्ष भरी
४० संघ/संस्थाहरुको दर्ता तथा संचालन सम्बन्धमा आई परेको समस्याहरुको समाधानको लागी पहल गर्ने । वर्ष भरी
४१ प्रदेश स्तरिय सहकारी विधेयक तथा निति निर्माणमा संघको सुझावहरु दिने । वर्ष भरी
४२ ऐन, नियमावली, मापदण्ड लगाएत सहकारी निति निर्माण तथा कार्यन्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने । वर्ष भरी
४३ संघबाट कर्जा लिएका सदस्य संघ÷संस्थाहरुको व्यवसायको व्यवसायिक मुल्याङ्कन गर्ने । साथै प्रारम्भिक संघ संस्थाहरुलाई क्यअष्ब िब्गमष्त गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने । वर्ष भरी
४४ सहकारी बैक स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने । वर्ष भरी
४५ बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरु आपसमा मिलि विशिष्टिकृत संघ गठन गरी सुचना संचार तथा नमुना व्यवसायिक कृषि उद्यम संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा संचालन गर्ने । वर्ष भरी
४६ नेपाल सरकारले गठन गर्ने स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्मको विभिन्न समिति तथा उप–समितिमा केन्द्रिय संघको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने । साथै प्रतिनिधित्व गरी आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिने । वर्ष भरी
४७ भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सहकारी विभागले जारी गर्ने निर्देशनहरुको परिमार्जनको लागि पहल गर्ने । वर्ष भरी
४८ संघको दिगोपनको लागि पूर्वाधार बिकास गर्ने । वर्ष भरी
४९ संघको कार्यहरु एंव सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई गुणस्तरिय, भरपर्दो, छिटोछरितो र प्रतिष्पर्धी बनाउन आधुनिक सुचना प्रणालीहरुको प्रयोग गर्ने । साथै सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धीत निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । वर्ष भरी
Site Visitors : 62423 Design & Develop By : LABA